Umhambisi Wezingxenye Ze-elekhthronikhi | IC Components Limited | I-Imijikelezo Ehlanganisiwe (IC) Ukutholakala kwedatha - I-Digital Potentiometers IC Electronic Capacitors Products X9259UV24IT1, buy AD5252BRUZ1-RL7, chips AD5282BRUZ50-REEL7, AD5245BRJZ100-RL7 stock, X9119TV14IZ-2.7 online
Ikhaya > Imikhiqizo > Imijikelezo Ehlanganisiwe (IC) > Ukutholakala kwedatha - I-Digital Potentiometers
Ukutholakala kwedatha - I-Digital Potentiometers
1,033 imikhiqizo ehlobene
Isikhombisi - Isizwa, I-Touch Capacitive(112)
I-PMIC - I-Voltage Regulators - Injongo Ekhethekil(1,367)
I-PMIC - I-Voltage Regulators - Abalawuli Abaqondi(87)
I-PMIC - I-Voltage Regulators - Ukushintshaniswa k(350)
I-PMIC - I-Voltage Regulators - Linear(11,701)
I-PMIC - I-Voltage Regulators - DC Reg Switching R(6,656)
I-PMIC - I-Voltage Regulators - Abalawuli be-DC DC(3,209)
I-PMIC - I-Voltage Reference(2,954)
I-PMIC - V / F neF / V Converters(72)
I-PMIC - Ukuphathwa Kwemvelo(216)
I-PMIC - Abaphathi(4,899)
I-PMIC - RMS kuya ku-DC Converters(40)
Abaphathi be-PMIC - Amandla Wokunikezela Amandla, (372)
Abaphathi be-PMIC - Amandla E-Over Ethernet (PoE)(218)
I-PMIC - Ukuphathwa Kwemandla - Okukhethekile(1,185)
Ukushintshwa kwamandla we-PMIC - Amandla, Ukushaye(2,273)
I-PMIC - PFC (Power Factor Correction)(379)
I-PMIC - NOMA Abalawuli, ama-diode amahle(177)
I-PMIC - Amshayeli Azindiza, Abalawuli(1,067)
I-PMIC - Ukukhanyisa, Abalawuli be-Ballast(165)
I-PMIC - Driver LED(1,811)
I-PMIC - Abashayeli be-Laser(121)
I-PMIC - Abalawuli Bokushintshwa Okushisayo(599)
Incazelo:IC XDCP QUAD 256TAP 50K 24-TSSOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2749 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC DGTL POT DUAL 1K 14-TSSOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2608 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC POT DGTL 50K 256POS 16TSSOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2633 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC DGTL POT 256POS 100K SOT23-8
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-4600 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC XDCP SGL 1024TAP 100K 14TSSOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2880 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC POT DGTL DUAL 256TAP 16-TQFN
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-4900 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC DALLASTAT 10K 8-DIP
Incazelo:IC DCP QUAD 100K 256TAP 24-TSSOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2791 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC POT DUAL DGTL 256TAP 10-UMAX
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2898 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC POT TRIMMER NV 10K 8-USOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2631 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC POT DIG QUAD 100K 8BIT 24SOIC
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2855 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC XDCP SGL 256TAP 100K 14-TSSOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2737 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC XDCP QUAD 64-TAP 10K 24-TSSOP
Incazelo:IC DGTL POT DUAL 50K 10-MSOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2612 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC DGTL POT 128POS 100K 16LFCSP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2782 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC POT DGTL 10K 256POS 10MSOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2717 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC POT DGTL 32-TAP 2WIRE SOT23-6
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2857 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC XDCP DUAL 256TAP 50K 24-TSSOP
Incazelo:IC POT DGTL 5K 256POS SOT23-8
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2626 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC POT DGTL QUAD 1K I2C 20TSSOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2673 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC POT DGTL QUAD 100KOHM 24TSSOP
Incazelo:IC POT DGTL 8BIT SGL 1K 8SOIC
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-4500 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC POT DGTL SNGL 5K SPI 8SOIC
Incazelo:IC POT TRIMMER NV 10KOHM 8SOIC
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2868 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC XDCP SGL 32-TAP 50K 8-SOIC
Incazelo:IC POT DGTL 100K SERIAL 16TQFN
Incazelo:IC POT DGTL 50K OHM 8-TSSOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2500 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP
Incazelo:IC DGTL POT 256P 50K QD 20TSSOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2777 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC POT DIG QUAD 10K 20-TSSOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2819 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC POT DGTL DUAL 10K OTP 10MSOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2794 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC XDCP SGL 256TAP 50K 14-TSSOP
Incazelo:IC RHEOSTAT 5V 50-TP 1024 10CSP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2827 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC POT DGTL 128TP LN LP 10-MSOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2733 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC XDCP 32-TAP 10K 3-WIRE 8-SOIC
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-6600 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC DGTL POT 1TIME PROGR 8-UMAX
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-6200 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC DGTL POT SNGL 128POS 8MSOP
Incazelo:IC XDCP DUAL 256TAP 100K 24-SOIC
Incazelo:IC DGTL POT DUAL 256POS 16-TSSOP
Incazelo:IC POT DGTL 10K SERIAL 8TDFN
Incazelo:IC RES TEMP 50/50K W/3MON 16-BGA
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2753 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC DGTL POT 10K 257TAPS 14-TSSOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2734 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC XDCP 3-WIRE 32-TAP 10K 8DIP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-6900 ama-pcs Stock atholakalayo.
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2881 ama-pcs Stock atholakalayo.
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2840 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC POT DIG QUAD 10K 20-DIP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2667 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:IC XDCP DUAL 64-TAP 10K 24-TSSOP
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2797 ama-pcs Stock atholakalayo.
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2744 ama-pcs Stock atholakalayo.